‘क्याप्टेन’ गीत पहिलो नम्बरमा - विवेचना
‘क्याप्टेन’ गीत पहिलो नम्बरमा
December 16, 2018 266 Views
अभिनेता अनमोल केसीको क्रेजको अब चर्चा गरिरहन उपयुक्त नहोला । लगातार पाँच फिल्मले बक्सअफिसमा मच्चाएको धुमबाट नै उनको क्रेज प्रमाणित भइसकेको छ । गत वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म ’कृ’ पछि पुन: पर्दामा देखिन लागेका उनको नयाँ फिल्म हो ‘क्याप्टेन’, जुन फागुन १७ गते रिलिज हुँदैछ । यसमा उनी फुटबल खेलाडीको भूमिकामा छन् ।
फिल्ममा उनको अपोजिटमा नवअभिनेत्रीद्वय उपासना सिंह ठकुरी र प्रियंका एमभी छन् । बिहीबार दिउँसो साढे ३ बजे यस फिल्मको ‘रहर छ सँगै…’ गीत युट्युब रिलिज भएको थियो । अनमोल र उपासना फिचर्ड गीतले अहिले युट्युबमा आक्रामक हिट्स पाइरहेको छ । रिलिजको ८ घण्टामा नै उक्त गीतले नेपालको युट्युब ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थान ओगटेको छ ।
अञ्जु पन्त र सुगम पोखरेलको स्वर रहेको गीतमाथि साढे ३ लाखभन्दा बढीको नजर परिसकेको छ । २१ हजार लाइक्स पाइसकेको गीतलाई साढे ३ हजारभन्दा बढी कमेन्ट मिलेको छ । कमेन्टमा अधिकांशले गीतलाई हलिउड र बलिउडसँग तुलना गरेका छन् । अनमोल र उपासनाको केमेस्ट्रीलाई उतिक्कै रुचाइएको छ ।
कमल भण्डारीले युट्युबको कमेन्टमा लोकेसनको प्रशंसा गर्दै लेखेका छन्, ’अनमोलको फिल्ममा मलाई सधैँ मन पर्ने सिन हो, जुन अनमोलको फिल्ममा पाउँछु । त्यसैले अनमोलको हरेक फिल्म हेर्छु ।’ अर्का युट्युब प्रयोगकर्ता मदन गुरुङले गीत हेरेपछि आफो प्रतिक्रिया दिएका छन्, ’आज बल्ल थाहा पाएँ हाम्रो नेपाली चलचित्र जगतले कति ठुलो फड्को मारिसकेको रैछ भनेर ।’
गीतलाई नेगेटिभ कमेन्ट निकै न्यून छ । अभिनेता र अभिनेत्रीको केमेस्ट्री, छायांकन, लोकेसन, कोरियोग्राफी, गायन, संगीत, शब्दको प्रशंसाले केमेन्ट बक्स भरिएका छन् । गीतले नै फिल्मको हाइप लोभलाग्दो तरिकाले निर्माण गरेको छ । यसको प्रभाव बक्सअफिस कलेक्सनमा देखिने फिल्मी पण्डितहरुको अनुमान छ । गीतमा अर्जुन पोखरेलको संगीत र दिग्गज धौरालीको शब्द छ ।
दिवाकर भट्टराई निर्देशित फिल्ममा सुनिल थापा, प्रशान्त ताम्राकार, सरोज खनाल, विल्सनविक्रम राई, राजाराम पौडेललगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय छ । फिल्मका निर्माता भुवन केसी हुन् । कथा सामिप्यराज तिमल्सिनाको हो । उक्त फिल्ममा चन्द्र पन्तको द्वन्द्व छ भने सम्पादनको जिम्मेवारी दीर्घ खड्काले सम्हालेका छन् ।
Previous ‘सुश्री सम्पत्ति’ सहित हलमा तीन फिल्म
Next ‘सिस्टर’ निकालेको विषयमा मिडल पोइन्टमा लफडा
Pingback: kniga prodazh
Pingback: caterina va in città
Pingback: 24 опен порно видео
Pingback: adam and eve first time sex toys
Pingback: Third Party Manufacturing In Punjab
Pingback: internet social media networks for businesses
Pingback: explores goals of assessments and looks into semantics and different types of semantic impairments. also explains memory including the stages of memory and models of semantic memory. notes on how to assess semantics
Pingback: final review for exam
Pingback: city jobs
Pingback: how to buyahome with bad credit
Pingback: testi beatles
Pingback: ut_usb_ac50_1002 drivers
August 16, 2017 164,874
August 19, 2017 20,353
August 16, 2017 11,241
× ×¢×¨×•×ª ×œ×™×•×•×™ ×¡×§×¡: ... [Trackback] [...] Read More on to that Topic: bibechana.com/2017/09/23/birta...
gamefly free trial: My family always say that I am wasting my time here at net, except I know I am g...
× ×¢×¨×ª×œ×™×•×•×™ ×ª×œ××‘×™×‘: ... [Trackback] [...] There you will find 38099 more Info on that Topic: bibecha...
×œ×™×•×•×™ ×‘×™×©×¨××œ: ... [Trackback] [...] There you can find 202 more Information on that Topic: bib...
× ×¢×¨×•×ª ×œ×™×•×•×™ ×¡×§×¡: ... [Trackback] [...] Find More Info here on that Topic: bibechana.com/2018/08/1...